(Daawo)-Booliska Oslo: Waxaan wel-wel ka qabnaa tiradaa soomaalida ee Oslo qaaday Corona-virus. - NorSom News
(Daawo)-Booliska Oslo: Waxaan wel-wel ka qabnaa tiradaa soomaalida ee Oslo qaaday Corona-virus.
Booliska Oslo oo la hadlay warbaahinta NorSom News ayaa sheegay inay wel-wel aad ah ka qabaan tirada dadka soomaalida ah ee sii kordheysa ee qaadeysa xanuunka Corona-virus. Gaar ahaan xaafadaha Oslo ee Tøyen iyo Grønland.
Halkan ka daawo fariinta booliska Oslo.
Si aad u hesho wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, halkan riix, kadibna Subcribe(Abonner).
Previous articleR.W UK oo laga helay Corona-virus.
Next article5 qof cusub oo maanta Corona-virus u dhimatay Norway.